दुखद भेट,सुखद शुरुवात « LiveMandu
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १०:३०
७ घण्टाको निरन्तरको यात्रा पछि म उनको शहर आइपुगे पोखरा, केही घण्टाको आराम पछि उनीसँग भेटने स्थान निस्चित गरे । पोखराको सिर्जनाचोकको एउटा कफी पसलमा हाम्रो सुख दुख पोख्ने थलो तोक्यौ । उ निकै शान्त अनि रातो उनको आखाँ, आखाँबाट पानीहरु बग्दै गरेको म स्पष्ट रुपमा देखिराको थिए अनि मलाई थाहा पनि थियो किन बग्दैछन यि आँशुहरु । किन रोएको ? म जान्छु है यस्तै गरी रुने हो भने । उसको आँशुको तिव्रता झन बढ्न थाल्यो, उनी पछाडि फर्किएर आफनो व्यथा वगाउन लागिन ।
दूई मिल्क कफीको अडर पश्चात मैले भने के भयो ?
उनी चुपचाप, कफीको चुस्की लगाउदै गर्दा उनले झोलाबाट घडी निकालिन अनि भनिन, यो घडी मैले लगाएकी छैन, सोचेकी थिए तपाईको श्रीमति बनेपछि लगाउछ । अब उसैलाई नै लगाइदिनुहोस जो तपाईको श्रीमति बन्ने छ । उसका आँखा फेरी पनि रसाउन लागे ।बिन्ती म अरु कसैसँग जिन्दगी बिताउन सक्दिन, म एक्लै जिउन तयार छु तर तपाईसँग देखेका सपनाहरु अरुको साथमा मलाई पुरा गर्नु छैन । बिन्ती मलाई अरु कसैले छुने अनुमति नदिनुहोस,उनी आजै आफना आशुँहरु रित्याउने सोचमा थिइन । घरमा आउनु बाबासँग कुरा गर्नु उनी एकोहोरो आफनो कुरा सुनाउदै थिइन ।
मेरो पनि चाहना नभएको होइन । म पनि चाहान्थे एउटा मिठो सम्बन्ध अनि सम्बन्ध सँगै जोडिएका सपनाहरु । तर मेरो अहिलेको अवस्था सपना पुरा गर्ने भन्दा पनि समस्या शुरु गर्ने छ । केही समय लाग्छ , अनि म निर्धक्कका साथ उनको बाबुआमासँग उनको हात माग्न सक्थे । म यो अनौठो अवस्थामा छु , उनको आँशु पनि देख्न सक्दिन अनि यस अवस्थामा उनलाई विवाह गर्न ।
छुटिदै गर्दा उनको त्यो गहिरो अगालोले निकै भावुक तुल्यायो । उनको अगाँलो बाघले सिकारलाई समाए जस्तो कसिलो थियो अनि निकै मायाले भरिएको । घरमा मेरोलाई केटा हेर्न थाल्नभएको छ, उनको आखाँबाट झेरको आँशुले घाटीमा चिसो बनाए अनि घाटी सँगै मन पनि चिसो भयो । त्यसपछि उनी अफिस तिर अनि म काठमाडौ ।
आज दुईवर्ष हुदैछ हाम्रो विवाहको सायद त्यस दिन बसपार्क बाट म सिधै काठमाण्डौ फर्किएको भए हाम्रो सपना सपना नै हुनेथियो होला । सपनालाई पुरा गर्न डराई डराई उनको घरमा पुगे, आफना कुरा सुनाए धेरै समयको गफपछि छोरीको खुसी नै हाम्रो खुसी हो , छोरी जे चाहान्छ त्यही हुन्छ भन्दै गर्दा मैले उनलाई मेसेज गरे “कहिले हो घरमा आउने , म तिम्रो घरमा छु । छिटो आउनु मैले मेरो सबै कुरा तिम्र्रो बुबा ममीलाई सुनाए, अब तिमी आएर बाबा ममीलाई विश्वास दिलाउनु कि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु र सधै खुसी राख्नेछु” ।